သင်အားကုန်ကျမှုအားနည်းသောဆွေးနွေးပွဲများသည်အဘယ်နည်း။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 23, 2015 ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 23, 2015 Jenn Lisak Golding
ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ဖြုန်းတီးနေသောကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုတွင်အကြိမ်မည်မျှရှိသည်ကိုသင်တို့အားမပြောနိုင်ပါ။ သူက glitchy software ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့တင်ဆက်သူတွေရောအသံဘေးအန္တရာယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကုန်သက်သာစေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဟာအချိန်ရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါဒါကသေချာပေါက်မကူညီပါဘူး။
အစည်းအဝေးတိုင်း - အွန်လိုင်း (သို့) လူကိုယ်တိုင် - သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအချိန်၊ ငွေနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်ပါကကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်မဖြစ်အစည်းအဝေး၏ရလဒ်ပေါ်မူတည်သည်။
သင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကျော်ဖြုန်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိသလား မလိုအပ်သောအစည်းအဝေးများအတွက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၃၇ ဘီလီယံ? တစ်မိနစ်စဉ်းစားပါ။ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသောအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်သင်ထိုင်သည့်အခါတိုင်းသင်၏ကုမ္ပဏီသည်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးနေသည်။ ထိုအခါငါတက်ရောက်ရန်အစည်းအဝေးများစွာကိုအကျိုးမဖြစ်ထွန်းဟုမြင်သည်ကိုအလောင်းအစားလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနှင့်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။
နှစ်စဉ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသည့်အစည်းအဝေးများအတွက်သုံးစွဲသောငွေပမာဏနှင့်အတူအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နည်းပါးသောကြောင့်ပြfixနာကိုဖြေရှင်းရန်အနည်းငယ်ကြိုးစားနေကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်အစည်းအဝေးများမည်သို့ကျင်းပသင့်ကြောင်းလမ်းညွှန်ရှိပါသလား။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသလား။ လူများသည်အစည်းအဝေးများပြီးနောက်လွှဲအပ်ခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်းရှိပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည်ဤမေးခွန်းများမှ“ မဟုတ်ဘူး” ဟုဖြေဆိုပါကသင်၏စီးပွားရေးတွင်အစည်းအဝေးများမည်သို့ကျင်းပသည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများသည်နှစ်စဉ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသည့်အစည်းအဝေးများအတွက်၎င်းတို့ငွေမည်မျှဖြုန်းနေကြသည်ကိုမသိရှိကြပါ။ ငါတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ ပူးပေါင်းနည်းပညာ သင်မည်မျှသုံးစွဲကြောင်းနှင့်မည်မျှအားနည်းနေသောကွန်ဖရင့်ကိုသင်ကုန်ကျကြောင်းအတိအကျဖော်ပြမည့်အပြန်အလှန်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုတီထွင်ရန် ReadyTalk ကိုစပွန်ဆာပေးသည်။ ပို။ ပင်ကောင်းတဲ့ကောင်းမှုအဘို့, သူတို့ရဲ့ထွက်စစ်ဆေးပါ အံ့သြဖွယ်အရင်းအမြစ်စာကြည့်တိုက်.
စမ်းကြည့်သည် ReadyTalk ၏အားနည်းသောကွန်ဖရင့်ဂဏန်းတွက်စက် အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်၏အစည်းအဝေးများကိုပြုပြင်တာတွေစတင်!
ထုတ်ဖော် - ReadyTalk သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် DK New Media!
Tags: အသံညီလာခံရေတွက်ရန်ကိရိယာကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ဖရချစ်သူvideo conferencingwebinar ပလက်ဖောင်း